» कसले पाउँछ वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री ? भाग २
कसले पाउँछ वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री ? भाग २
१३ बैशाख २०७७, शनिबार १७:२८
मकवानपुर, १३ बैशाख । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ अहिले लकडाउनका कारण स्थगित छ । नेपालमा लकडाउन हुनुपूर्व यस सिजनको वाईल्ड कार्ड राउण्ड सम्पन्न भएको थियो । वाईल्ड कार्डमा उत्कृष्ट १० भित्र परेर बाहिरिएका ५ जना प्रतियोगीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । ५ जनामध्ये वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीमा कसले सफलता पाउँलान् ? यस बारेमा पहिलो भिडियो हामीले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेका थियौँ । उक्त भिडियोमा हामीले ३ जना मात्र सहभागीहरुका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ । यस भिडियो सामग्रीमा भने वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भिडेका मध्ये बाँकी २ जना प्रतियोगीहरुको वाईल्ड कार्ड जित्ने सम्भावनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि भिडेका किरण कुमार भुजेल र मेघा श्रेष्ठमध्ये वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री पाउने बलियो सम्भावना कसको कस्तो छ ? यस भिडियो सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ । तपाईको विचारमा यी २ प्रतियोगीमध्ये कसको बलियो सम्भावना छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्ड ईन्ट्री पाउने बलियो सम्भावना भएका प्रतियोगी हुन् किरण कुमार भुजेल । नेपाल आईडलको स्टेजमा भर्सटाईल सिंगरका रुपमा ख्याति कमाएका किरण यसअघि नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ सम्म पुगेका थिए । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा किरणले उत्कृष्ट प्रस्तुतिको अवार्ड समेत पाएका थिए । किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ४ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले गाला राउण्डमा २ वटा अपलीफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पफार्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । साथै वाईल्डकार्डमा उनले अपलीफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । संगीत विषयमा स्नातक गरेका किरणका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । स्टेज प्रस्तुतिमा निकै नै अब्बल ठहरिएका किरणका फ्यान फलोईङ पनि धेरै छन् जसका कारण उनले वाईल्डकार्ड जितेर फाईनलमा पुग्ने सम्भावना भएको समिक्षकहरु बताउँछन् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेका अर्का बलिया प्रतियोगी हुन् मेघा श्रेष्ठ । सिजन ३ की एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा यसअघि उत्कृष्ट ५ सम्म पुगेकी थिईन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा थप तहल्का मच्चाएकी मेघाले उक्त प्रस्तुतिबाट अवार्ड समेत जितेकी थिईन् । मेघाले गोल्डेन माईकसँगै गाला राउण्डमा ८ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मेघाले ३ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड, ३ वटा अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड र २ वटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेकी छिन् । संगीतमा औपचारिक शिक्षा नलिएता पनि उनी रकिङ प्रस्तुतिहरुका कारण चर्चामा छिन् । स्टेजमा तहल्का मच्चाउने गरेकी मेघाले निर्णायकहरुबाट राम्रो कमेन्टहरु पाएकी छिन् । दर्शकको पनि साथ रहेमा उनलाई फाईनलमा पुग्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने समिक्षकहरु बताउँछन् ।